Garowe: Lacago faalso ah oo la qabtey 10 Nov 10, 2012 - 5:22:37 AM
Lacago Been abuur ah oo Shilinka Somaliga ah ayaa Ciidamada Booliska gobolka Nugaal waxa u suuroobey inay gacanta ku dhigaan taasi oo gaareysey ilaa 12-Milyon.
Shir saxaafada maanta 10 November,2012 xarunta wasaarada maaliyada Puntland lagu qabtey ayaa waxa isugu yimid ku simaha wasiirka ahna wasiir ku xigeenka maaliyada Cabdi Ibraahim Warsame''Qowdhan'' ,agaasimaha Bangiyada Puntland Xirsi Maxamed Jaamac iyo Taliyaha Barta Kantaroolka Koonfureed ee Garowe Dhame Gaarane Wakiil Diiriye.
Wasiir ku xigeenka maaliyada Puntland Cabdi Qowdhan ayaa bilowgii ka hadlay lacagahan oo uu sheegey in dhowaanahan ay ku soo qulqulayeen deegaanada Puntland iyaga oo ka imanaya dhinaca Koonfurta dalka.
Ganacsatada iyo Sariflayaasha ayuu uga digey inay lacagahan isticmaalaan ama keenaanba guud ahaan Puntland ,iyadoona uu ku amrey ciidamada Baraha kantaroolada fadhiya inay si fiican u baaraan gaadiidka ka imanaya waqooyiga iyo Koonfurta dalka.
Taliyaha Kantaroolka Koonfureed ee Garowe Dhame Gaarane Wakiil Diiriye ayaa dhankiisa ka waramay qaabka ay lacagtan u soo qabteen iyo mid ka horeysey oo gaari xoolo sidey laga dhex helay.
Waxa uu ku adkeeyey Gaarane inay sii wadi doonaan xoojina doonaan baritaanada gaadiidka lagu soo dhex qariyo lacagahan faalsada ah ,isagoona raaciyey in Malab lagu soo qariyey tii ugu danbeysey ee qabteen.
Mudooyinkii ugu danbeysey ciidamada booliska Puntland ayaa dagaal xoogan kula jirey dabagalka iyo gubida lacagaha Faalsada ah kuwaasi oo Suuqa Sicir barar xoogan ku ridi kara hadii ay galaan ,waxana ay ahayd dhowaan markii 135 Kun oo Doolarka Maraykanka lagu gubey Galkacayo.
Halkan ka dhageyso Warbixinta Cawil Cali Jaamac ka diyaariyey